Wisdom of Dhamma: အခက်အခဲများကို အောင်မြင်ကျော်လွှားနည်း (၁)
အခက်အခဲများကို အောင်မြင်ကျော်လွှားနည်း (၁)
(Ven. K. Sri. Dhammananda ၏ How To Overcome Your Difficulties စာအုပ်ငယ်ကို ဘာသာပြန် တင်ပြပါသည်။
စိတ်ပူနေပါလား။ စိတ်ပျက်လက်ပျက် ဖြစ်နေပါသလား။ ဒီလိုဆိုလျင်တော့ သင့်ရဲ့ပြဿနာတွေကို အသေအချာ နားလည်လာအောင် ဒီစာစောင်လေးကို ဖတ်ဖို့ ဖိတ်ကြားပါတယ်။ ဒီစာစောင်လေးကို သင်နှင့် ပူပန် သောကရောက်နေကြတဲ့ သူတွေကို ရည်ရွယ်တာပါ။
ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့် ပူပန်သောကဟာ လောကီရေးရာ အခြေအနေတွေရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုတွေကြောင့် ဖြစ်ပေါ် လာတဲ့ အတွေးစိတ်တွေမှ မွေးဖွား ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ ကပ်ငြိမှုတဏှာနှင့် တွယ်တာမှုမှာ မြစ်ဖျားခံပါတယ်။ အမှန်စင်စစ်ကတော့ ဘဝဆိုတာ အရာရာ အမြဲမပြတ် ရွေ့လျား ပြောင်းလဲနေတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတစ်ခုလိုပါပဲ။ ဒီလောကမှာ ဘယ်အရာမှ ခိုင်မြဲ တည်ငြိမ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ငယ်ရွယ် နုပျို သန်မာကြသူတွေက ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နှင့် သေကြရမှာကို ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ အိုမင်းရင့်ရော်ပြီး ဆင်းရဲဒုက္ခ ရောက်နေကြသူတွေက အသက်အရှည်ကြီးနေကြရမည့်ရေး ပူပန်နေကြတယ်။ ဒီနှစ်ခုကြားက လူတွေက တစ်နှစ်ပတ်လုံး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေရဖို့ မက်မက်မောမောကြီး တောင့်တနေကြပြန်တယ်။
ကောင်းတာလေးတွေကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် မျှော်လင့်စောင့်စားရတာတွေက မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲ ပြီးဆုံးသွားပါတယ်။ မသာယာ မမြတ်နိုးဖွယ်ကို ကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့ စောင့်စား မျှော်လင့်ရမှုတွေက ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်ခဲဟန်တူတဲ့ ပူပန်သောကတွေကို ဖန်တီးပေးပါတယ်။ ဒီလိုစိတ်ခံစားရမှုတွေဟာ သဘာဝပါပဲ။ ကြိုးဆွဲခံရတဲ့ ရုပ်သေးရုပ်တစ်ရုပ်လိုပါပဲ။ ဘဝရဲ့ ဒီလိုမျိုး အတက် အကျတွေဟာ တကယ် မရှိတဲ့ အတ္တနှင့် ကစားနေကြရတာပါ။ ဒါပေမဲ့ စိတ်ကတော့ အဲဒီအတ္တရဲ့ အထွဋ်အထိပ်မှာ ရှိပါတယ်။
ဘာဝနာလို့ တစ်နည်းတစ်ဖုံ သိကြတဲ့ စိတ်လေ့ကျင့်မှုဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထကြွသောင်းကြမ်းမှုကို ယဉ်ကျေးအောင် လုပ်ခြင်းရဲ့ ပထမခြေလှမ်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်က
“ချစ်ခင် တွယ်တာခြင်းကြောင့် သောကရောက်ရ၏၊
သောကကြောင့် ကြောက်ရွံ့မှု ဖြစ်ရ၏၊
ချစ်ခင် တွယ်တာမှု လုံးဝ ကင်းသောသူအတွက် သောကကင်းကွာ၊
ကြောက်ရွံ့မှုလည်း အလွန်ပင် နည်းလာရပေတော့၏” လို့ ရှင်းလင်း ဟောကြားတော်မူထားပါတယ်။
မည်သည့်ပုံစံနှင့်ပဲ ခင်မင် တွယ်တာ သံယောဇဉ်ဖြစ်ဖြစ် သောကနှင့် အဆုံးသတ်ရပါလိမ့်မယ်။ မျက်ရည်စတွေက ဘဝရဲ့ မတည်မြဲခြင်းသဘောကို အဆုံးသတ်မပေးနိုင်သလို အချိန်ဆွဲပြီး နှုတ်ဆက်နေ တာကလဲ အဆုံးသတ် မပေးနိုင်ပါဘူး။ အရာခပ်သိမ်းဟာ မမြဲပါဘူး။
အသက်ကြီးသူတွေပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ငယ်ရွယ်ကြသူတွေပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီဘဝမှာ ဒုက္ခခံစားကြရတာပါပဲ။ မည်သူမျှ ချွင်းချက် မရရှာကြပါဘူး။ ဆယ်ကျော်သက် အများစုဟာ ပိုမိုကြီးမားတဲ့ ဆင်းရဲဒုက္ခကို ခံစားကြရ ပါတယ်။ ဖားလဲ မဟုတ် ဖားလောင်းလဲ မဟုတ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် ဆယ်ကျော်သက်တွေဟာ ဆန့်ကျင်ဘက် လိင်ရှိသူတွေနှင့် တည်ငြိမ်တဲ့ ဆက်ဆံရေး တည်ဆောက် ခံစားကြတာကတော့ ခံထိုက်ပါတယ်။ သူတို့ကိုယ်သူတို့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အာရုံတွေအဖြစ် ရှုမြင်ခံရတာကို ဂုဏ်ယူနေကြတဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက် လိင်ရှိသူတွေကို အထင်ကြီး စွဲမက်စေဖို့ ကြိုးစားကြရာမှာ သူတို့တွေရဲ့ ဆွဲဆောင်နိုင်မှုကို ကြိုးစားပမ်းစားကို ပြစားကြ ကြွားလုံးထုပ်ကြပါတယ်။ ယောက်ျားရော မိန်းမပါ တကယ်ကို သူတို့မဟုတ်တဲ့ အတိုင်း ပြုမူနေထိုင်ဖို့ ကြိုးစားကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ တွေးတာ ခေါ်တာကြတော့ အရွယ် ရောက်ပြီးသူတို့လိုမျိုး ကြိုးစားကြတယ်။ သဘာဝအတိုင်း ပြုမူ နေထိုင်မယ်ဆိုရင် သူတို့တွေကို ဟားကြမှာကို ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ ဒီ အပြုအမူမျိုးဟာ အမြတ်ထုပ်ခံရမဲ့ အလားအလာ ရှိပါတယ်။ အပယ်ချခံရမှာ ကြောက်ရွံ့ကြသလို အတ္တမာနတွေ သိမ်ငယ်မှာကိုလည်း ပူပန်ကြပြန်ပါတယ်။ တစ်ဖက်သတ်အချစ်ဟာ ဆယ်ကျော်သက် အများအပြားတို့ရဲ့ အသဲတွေကို မကြာခဏ ခွဲပစ်ပါလိမ့်မယ်။ အကြောင်းကတော့ သူတို့တွေဟာ သူတို့ကို သူတို့ အရူးလုပ်မိကြပြီလို့ ခံစားကြလို့ပါ။ အချို့ဆို ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေမိသည် အထိကို ဖြစ်စေပါတယ်။ သို့ဖြစ်ရလင့်ကစား ဘဝကို ယထာဘူတကျကျ (အရှိ အရှိအတိုင်း၊ အမှန်အမှန်အတိုင်း) မြင်တတ်လျှင်ကား ဒီလိုမျိုး ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာကြီးကို ရှေင်ရှားနိုင်ပါသတယ်။ မှန်မှန်ကန်ကန် ကြီးထွား ရင့်ကျက်ဖို့ ဗုဒ္ဓရဲ့ ဘဝကို ချဉ်းကပ်ပုံ ချဉ်းကပ်နည်းကို လူငယ်တို့ကို သင်ပေးရပါမယ်။
“ဘယ်မှာပဲ ကြောက်ရွံ့မှု ဖြစ်ဖြစ်၊ ကြောက်ရွံ့မှု ဆိုတာ လူမိုက်မှာသာ ဖြစ်တာပါ၊ ပညာရှိမှာ မဖြစ်ပါဘူး” လို့ ဗုဒ္ဓက မိန့်ကြားတော်မူထားပါတယ်။
ကြောက်ရွံ့မှုဆိုတာ စိတ်အခြေအနေ တစ်ရပ်ထက် မပိုပါဘူး။ မိမိရဲ့ စိတ်ဟာ ထိန်းချုပ်လို့၊ ဦးတည်ရာ ပြောင်းပေးလို့ ရတဲ့ အရာမျိုးပါ။ အပြုသဘောမဆောင်တဲ့ အတွေးစိတ်ဟာ ကြောက်ရွံ့မှုကို ဖြစ်စေပါတယ်။ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အတွေးစိတ်ကတော့ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေနှင့် စံနှုန်းတွေကို အကောင်ထည်ပေါ် ပြီးမြောက်စေပါတယ်။ ရွေးချယ်မှုကတော့ ကျွန်ုပ်တို့၏ တာဝန်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူသားတိုင်းဟာ မိမိစိတ်ကို မိမိ ထိန်းသိမ်း စောင့်စည်းဖို့ စွမ်းရည်ရှိပါတယ်။ သဘာဝတရားက လူသားကို တစ်စုံတစ်ခုအပေါ်မှာ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အခွင့်အာဏာ အပ်နှင်းထားပါတယ်။ အဲဒါကတော့ အတွေး စိတ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူသားတစ်ဦး ဖန်တီးတဲ့ အရာတိုင်းဟာ အတွေးကပဲ စပါတယ်။ ကြောက်ရွံ့မှုကို အောင်နိုင်ဖို့ နည်းလမ်းကို ပိုမို နားလည်အောင် ကူညီမဲ့ သော့ချက်က ဒီမှာပါ။
တစ်ခါက ထင်ရှား ကျော်ကြားတဲ့ ဗြိတိသျှ ခန္ဓာဗေဒပညာရှင် တစ်ဦးကို ကျောင်သား တစ်ယောက်က ကြောက်ရွံ့မှုကို ကုသဖို့ အကောင်းဆုံး ကုထုံးက ဘာပါလဲ လို့ မေးပါတယ်။ ပညာရှင်ကြီး ပြန်ဖြေတာက “တစ်ဦး တစ်ယောက် အတွက် တစ်စုံတစ်ခုကို ကြိုးစားပြီး လုပ်ပေးပါ” တဲ့။
အဖြေကြောင့် ကျောင်းသားဟာ အတော်လေးကို အံအားသင့်သွားပြီး ထပ်ရှင်းပါဦးဗျာ လို့ တောင်ပန် ပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ သူ့ဆရာက “တစ်ချိန်တည်းမှာ မင်းဟာ ဆန့်ကျင်ဖက် (အတွေး)စိတ် နှစ်ခုကို မင်းစိတ်ထဲမှာ ထားလို့ မရပါဘူး” လို့ ပြောလိုပါတယ်။ အတွေးတစ်ခုက အခြားအတွေးတစ်ခု အမြဲပဲ မောင်းထုတ်ပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ - သင့်ရဲ့ စိတ်ကို အခြားတစ်ယောက်ကို ကူညီဖို့ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်မှု ကင်းတဲ့ ဆန္ဒနှင့် လုံးဝ ဖြည့်ဆည်းထား သိမ်းပိုက်ထားတယ် ဆိုရင် မင်းဟာ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ကြောက်ရွံ့မှုကို လက်ခံထားလို့ မရပါဘူး။
“စိုးရိမ်ပူပန်မှုက သွေးသားတွေကို အရွယ်မတိုင်မီ ခန်းခြောက်စေပါတယ်။” ကြောက်ရွံ့မှုနှင့် သောက အသင့်အတင့်ကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထိမ်းသိမ်းထားခြင်းဆိုတဲ့ သဘာဝ ဗီဇပါ။ ဒါပေမဲ့ အမြဲမပြတ် ကြောင်းကျိုး မဆီလျှော်တဲ့ ကြောက်ရွံ့မှုနှင့် ကာလတာရှည် ပူပန်မှုကတော့ လူသားရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အကြင်နာ ကင်းတဲ့ ရန်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါတွေက ခန္ဓာကိုယ်ဆိုင်ရာ ပုံမှန် လည်ပတ်မှုကို ဖောက်ဖောက် ပြန်ပြန် ဖြစ်စေပါတယ်။
Posted by ဘုန်းဉာဏ် at Monday, December 20, 2010
အခက်အခဲများကို အောင်မြင်ကျော်လွှားနည်း (၂)